Lane Dheeraad ah illaa D-100 ee Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli | RayHaber | raillynews
HometareenkaLaynka dheeraadka ah ee D-100 ee Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli
05 / 06 / 2018 tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Dawlada hoose ee Kobanheegan, D-100 ee Adnan Menderes iyo Turgut Ozal oo ka gudbay dhinaca Ankara waxay samaynayaan shaqooyin dheeraad ah. Wareegga dheeraadka ah si loo yareeyo cufnaanta taraafikada waxaa isticmaali doona gaadiidka dadweynaha. Joojinta gaadiidka dadwaynaha ayaa sidoo kale laga heli doonaa laynkaas cusub. Iyadoo la raacayo gaadiidka dadweynaha ee dariiqa dheeraadka ah, ciriiriga gaadiidka oo sababay baabuur dhimista D-100 ayaa la tirtiri doonaa. Gawaarida dheeraadka ah ee basaska, basaska iyo gawaarida xamuulka ah ayaa u oggolaanaya rakaab badan oo raaxo leh in ay soo dejiyaan iyo isku duba ridaan.
ASPHAL LOO BAAHAN YAHAY
Codsiyada dhulka ee qashinka dheeriga ah, oo wali socdo, ayaa la dhammeystirey. Kunaan kun oo mitir ah ayaa lagu dhajiyay dabaqa wadada. Shaqooyinka asfalka ayaa lagu bilaabay qaybta wadada marka laga reebo qeybaha hoos yimaada buundada. Wadarta hal kun oo ah 500 oo tufaax ah ayaa lagu rakibayaa laynka dheeriga ah ee dabaqa koowaad ee asfalt la tuurayo. Xudduudaha iyo dharka iyo xirashada shaqooyinka asfaltka ah ayaa sidoo kale lagu samayn doonaa haadka. Shaqada qubeyska biyaha roobka ayaa sii socota. Baaxadda daraasadda, wuxuu sameeynayaa haad cusub oo u dhaxeysa aagga u dhaxeeya D-100 iyo jidka tareenka. Marka mashruuca ka dhexeeya Adnan Menderes Pedestrian Overpass iyo Turgut Özal Pedestrian Overpass ayaa la dhammeeyaa, D-100 Ankara waxay ka kici doontaa laba haad iyo saddex haad.
TALAABOOYINKA IYO KORONTADA
Thanks to laynka cusub, oo kaliya ay isticmaali doonaan gaadiidka dadweynaha iyo gawaarida adeegga, xoojinta joogsiga gaadiidka dadweynaha ayaa looga hortagi doonaa. Intaa waxaa dheer, dadka waayeelka ah iyo dadka naafada ah waxay isticmaalaan nidaamka jaranjarooyinka iyo wiishka. Iyadoo laynka cusub lagu darayo, joogsiyada ayaa isbeddelaya. Joojinta guryaha dadweynaha waxay ka soo horjeedaa xarunta saldhigga ISU (Gendarmerie Lodging) hore halka Turgut Ozal Overpass ay ka soo baxayaan Xarunta Ganacsiga ee Ekşi.
Waa reebban tahay in lagu wado korantada gaadiidka dadweynaha ee Kocaeli
Jilbarku wuxuu ku nasan doonaa D-100
Salim Dervishoge Street si ay u noqdaan Alternative to D-100
Wadada İzmit Salim Dervişoğlu Street waxay noqon doontaa Beddelka loo yaqaan 'D-100'
Adnan Menderes Guud ahaan
Goobta Metro Station ee Gebze
Duullimaadyada gudaha ayaa ka bilaabanaya 1da Juun garoonka diyaaradaha Helitaanka Shahaadada Cudurka faafa
Taxaddarrada ku saabsan xannaanooyinka gaarka loo leeyahay ee la furi doono 1da Juun
Jadwalka Subway iyo Ankaray Jadwalka Ankara
Wadada Roadzmir Wadooyinka iyo Wadooyinka Wadooyinka RAYHABER Waxay ku siisaa marinnada ugu fudud iyo xaaladaha wadada ee aad kula tegi karto khariidad waddo oo toos ah. Xarunta Izmir iyo degmooyinka kale [More ...]
Ma Lahaa Inaad Ku Fududiso Xayawaanka Gaadiidka Dadweynaha
Muscovites waxay awoodi doonaan inay arkaan meesha gaadiidka dadweynaha ee khariidada
Ogeysiiska Iibsiga: Baadhitaanka korantada iyo nidaamyada kontaroolada ee gaadiidka dadweynaha…